Ulutsha lubanjelwe eChicago kwiHalloween kudutyulwa intombazana eneminyaka esi-7 ubudala - Usnews
Inkwenkwe eneminyaka eli-15 ubudala igwetywe ngokudutyula intombazana eneminyaka esi-7 ubudala eyayiphume iqhinga okanye ukunyanga.
UJohn J. Kim / Chicago Tribune nge-AP
Inkwenkwe eneminyaka eli-15 ubudala yabanjwa kwangoko ngoLwesihlanu malunga nokudutyulwa kwentombazana eneminyaka esi-7 ubudala eyayikhohlisa okanye iphatha ngobusuku be-Halloween eChicago, amapolisa athi kwingxelo yeendaba enikezelwe kwi-MC chatel.
Le nkwenkwana yatyholwa ngamatyala amabini okuzama ukubulala inqanaba lokuqala kunye namatyala amabini okukhupha umpu, ngokweSebe lamaPolisa aseChicago.
Le ntwazana yayiqhatha nosapho lwayo kwindawo yaseChicago kwilali encinci malunga nentsimbi ye-5:30 p.m. ngeHalloween xa indoda eneminyaka engama-31 ubudala eyayileqwa ubuncinane ngabanye abantu abathathu yabaleka yadlula kubo, amapolisa athi. Ngethuba omnye waba bantu eqala ukudubula umpu, amapolisa athi le ntwazana ibanjwe phakathi kwaye yenzakele kakhulu. Indoda enamashumi amathathu ananye ubudala nayo idutyulwe esandleni.
Inkwenkwe eneminyaka eli-15 ubudala yayinxibe imaski ye-'Jason'-style ye-Halloween ngexesha lokudubula, uSuperintendent weSebe lamaPolisa aseChicago u-Eddie Johnson wathi kwinkomfa yabezindaba ngoLwesihlanu.
UJohnson uthe amapolisa akholelwa ukuba ukudubula kube sisiphumo sengxabano yeqela lemigulukudu kwaye intombazana 'yayikwindawo engafanelekanga ngexesha elingalunganga.'
Intombazana yahlala ikwimeko emaxongo ukusukela ngentsasa yangoLwesihlanu, utshilo uJohnson.
umthi wekati umthi wekrisimesi
Jonga le post kuFacebook
Amapolisa asakhangela 'abaphuli-mthetho abaninzi' ababandakanyekayo kukudubula kwaye acele uluntu ukuba lungenise naluphi na ulwazi abanalo malunga nesi sehlo, utshilo uJohnson.
Uthe iingcebiso ezingeniswe luluntu, kwakunye nevidiyo yokudutyulwa kwakhe, abe luncedo kuphando, nangona engachazanga ukuba ubhekisa kweyiphi ividiyo.
Kwinye ividiyo ifakwe kuFacebook ukusuka kwindawo ekudutyulwe kuyo, izithonga zemipu ezininzi zivakala phambi kokuba abantu, kuquka omnye onxibe imaski emhlophe, babonwe bebaleka.
Kwi-tweet ngoLwesihlanu, uMongameli uDonald Trump wabonakala ephawula ngokudubula ngelixa egxeka uJohnson kwi-tweet .
Ezona zinto zilungileyo zokuhombisa ekhaya
IChicago ayinakuze ilumise ulwaphulo-mthetho lwayo kunye noNtsumpa wamaPolisa wangoku. Ayizukwenzeka nje! Ndiyabulela kuKevin Graham kunye nawo onke amaPolisa aseChicago OMKHULU ndifumene ilungelo lokudibana. Amandla amakhulu okulwa nolwaphulo-mthetho ukuba uyavunyelwa ukuba wenze into yakho!
12:39 PM - 01 Nov 2019
Xa ecelwa ukuba aphawule nge-tweet kaTrump ngexesha lenkomfa yangoLwesihlanu, uJohnson uthe, 'Yintoni inqaku? Akukho mfuneko yokuba ndiphendule kuye.'
Intombazana eneminyaka esi-7 ubudala yadutyulwa kwiNtamo engezantsi ngelixa iQhinga-okanye-inyanga eChicago.uclaudia korner ·Ngomhla woku-1 kuNovemba ka-2019
imibala yepeyinti emhlophe
yesine yemidlalo kaJulayi
ukuthenga ikhaya leholide